Yakachipa Flat Inofa Fertilizer Extrusion Granulator Muchina Vanopa uye Fekitori | YiZheng
Chii chinonzi Flat Die Fertilizer Extrusion Granulator Machine?
Flat Die Fertilizer Extrusion Granulator Muchina yakagadzirirwa mhando dzakasiyana uye dzakateerana. Iyo flat flat die granulator muchina inoshandisa iyo yakatwasuka gwara kufambisa fomu, izvo zvinoita kuti roller irambe ichitenderera pasi pechiito cheyekumanikidza simba. Iyo poda zvinhu zvinodzingwa kubva mugomba remuchina wekudhinda neiyo roller, uye iyo cylindrical pellets inobuda kuburikidza neiyo disc. Flat Die Fertilizer Extrusion Granulator Muchina chinhu chakakosha midziyo muindastiri indasitiri, inokodzera kugadzirwa kukuru.
Chii chinonzi Flat Die Fertilizer Extrusion Granulator Muchina unoshandiswa?
Flat Die Fertilizer Extrusion Granulator Muchina inogadzirwa uye inoshandiswa mune dzakasiyana mhando yekugadzira manyowa. Uye munguva zhinji, inofanira kugadzirirwa uye ishandiswe mu organic fetiraiza uye mukomboni inogadzira fetereza mutsara. Isu tiri sehunyanzvi hwekugadzira michina yemuchina, isu hatisi chete tinopa iyo imwechete fetiraiza granulator muchina, asi zvakare tinogona kugadzira iyo yakakwana fetereza yekugadzira mutsara kune akasiyana vatengi. Mumutsetse wekugadzira fetiraiza, unofanirwa kuve unogadzirirwa nemushonga wefetiraiza pamwe neiyo gorofa kufa granulator muchina uye bhora kuumba muchina kugadzira iyo fetiraiza granulator kuita bhora chimiro.
Munguva yekushanda, izvo zvinoshandiswa zvinosvinirwa kusvika pasi neiyo roller, ndokugurwa neiyo inokwenenzvera, zvobva zvapinda mumatanho maviri akasanganiswa kukwenya, kutenderera mubhora. IyoFlat Die Fertilizer Extrusion Granulator Muchina ine zvakanakira yakakwira pellet inoumba chiyero, hapana zvinhu zvinodzoka, yakasimba granule simba, yunifomu kutenderera, yakaderera granule mwando uye kushoma kuomesa simba rekushandisa.
Hunhu hweFlat Die Fertilizer Extrusion Granulator Machine
1.Muchina uyu unonyanya kushandiswa kugadzira granule kugadzira kweiyo organic organic fetiraiza uye feed yekugadzirisa indasitiri.
2. Iyo granules inogadzirwa ne Flat Die Fertilizer Extrusion Granulator Muchina vane nzvimbo isina kutsetseka uye yakachena, kuomarara zvine mwero, tembiricha yakadzika inokwira panguva yekuita, uye inogona kuchengetedza zvinovaka muviri zvezvinhu zvakasvibirira chaizvo.
3. Uniform granules, iyo dhayamita yemagirigisi inogona kukamurwa kuita: Φ 2, Φ 2.5, -3.5, Φ 4, -5, -6, -7, -8, nezvimwe. Vashandisi vanogona kusarudza zvinoenderana nezvinodiwa chaizvo.
4. Granule hunyoro hwemukati hwakadzika uye hwakakodzera kuchengetwa uye kutakurwa, saka yakavandudza zvakanyanya chiyero chekushandisa.
Zvimiro zveFlat Die Fertilizer Extrusion Granulator Machine
►Iyo yakapera chigadzirwa granule cylindrical.
►Izvo zvemukati zvemukati zvinogona kusvika ku100%, gadzira yakachena organic granulate
►Uchishandisa organic organic granule ine mutual mosaic uye kuva hombe pasi peimwe simba, hazvidi kuti uwedzere bhainda kana uchiita granulating.
►Ine yakasimba chigadzirwa granule, inogona kusefa yakananga mushure megirusi kudzikisa simba rekushandisa yekuomesa
►Mushure mekuvirisa zvinhu hazvidi kuoma, hunyoro hwezvinhu mbishi hunogona kunge huri mu20% -40%.
Flat Die Fertilizer Extrusion Granulator Machine Vhidhiyo Ratidza
Flat Die Fertilizer Extrusion Granulator Machine Model Sarudzo
Kugadzira (t / h)
Chiyero chegranulating (%)
Granule tembiricha inomuka (℃)
Pashure: Nyowani Mhando Organic & Compound Fertilizer Granulator Muchina
Zvadaro: Kaviri Screw Inoburitsa Granulator